Ukusetwa kwaBucala-I-Wi-Fi elungileyo, ikhitshi eligcweleyo, i-W/D
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguLynn
Kwindawo ezolileyo, enkulu-yantlukwano yendawo yokuhlala kwindlela efileyo enemibono emangalisayo yeentaba, i-mesas, ukutshona kwelanga, izibane zedolophu. Umoya wasemaphandleni nje imizuzu eli-10 ukusuka eDolores. Indawo entle "yokusebenzela ekhaya." Indawo erentwayo yindlu edityaniswe negaraji yehostele. Umamkeli uhlala kwindawo yokuhlala eyahlukileyo emalunga neemitha ezingama-400 kwaye ihlolwe yimithi, isenza le ndawo ibe yindawo efanelekileyo yeendwendwe ezikhetha indawo yabucala.
I-Queen bed iphezulu kwigumbi eliphezulu elivulekileyo. Kubonelelwe ngoomatrasi ababini bomoya obutofotofo, abanendawo yokuseta nokuba kumgangatho ophezulu okanye kwindawo ephambili yokuhlala, njengoko undwendwe lukhetha. Ukongeza, i-sofa igoba ibe yibhedi encinci ephindwe kabini, ilungele abantwana abancinci ababini okanye umntu omnye ogcweleyo ongakhathaliyo ngelungiselelo elithile lokulala le-spartan. Le ndlu isandula ukugqitywa ngo-2019 kwaye ikhitshi ixhotyiswe ngazo zonke izixhobo ezitsha: ifriji egcwele ubungakanani obunomkhenkce, uluhlu lombane, i-microwave, i-dishwasher. Ukuzihlola ngokwakho ngeeyure eziguquguqukayo usebenzisa isitshixo se-elektroniki ngekhowudi yokupasa.
4.98 ·Izimvo eziyi-50
Kufuphi neLizwe likaPhil, iPaki yeSizwe yaseMesa Verde, iiCanyons zeMonument yeSizwe yaMandulo, kunye neHlathi leSizwe laseSan Juan. Konwabele ukukhwela intaba ngebhayisekile, ukukhwela intaba, ukutyibilika ekhephini, ukujonga iindawo zakudala, kunye namanye amathuba amaninzi okuzonwabisa angaphandle. Simalunga neeyure ezimbini ukusuka Canyonlands National Park kunye Arches National Park e Utah, kwaye malunga 1 1/2 iiyure ukusuka Telluride. Idolophu encinci kodwa enenkonzo epheleleyo yaseDolores ikumgama oziikhilomitha ezi-4/10 kuphela kunye nevenkile yokutya, iindawo zokutyela ezininzi, izikhululo zegesi, ivenkile yotywala, iposi, ithala leencwadi. I-Cortez imalunga nemizuzu engama-20, iDurango imizuzu engama-45.
Umbuki zindwendwe ngu- Lynn
Nangona ukuzihlola ngokwakho kunikezelwa, umamkeli wakho uhlala kwindawo kwaye uyafumaneka ukuphendula imibuzo okanye ukulungisa nayiphi na imiba enokuthi ivele. Xa ukude nekhaya, umamkeli wakho uya kufikeleleka ngeselfowuni kunye ne-imeyile okanye uya kubonelela ngomfowunelwa wasekhaya onokuphendula kuyo nayiphi na imiba.
Nangona ukuzihlola ngokwakho kunikezelwa, umamkeli wakho uhlala kwindawo kwaye uyafumaneka ukuphendula imibuzo okanye ukulungisa nayiphi na imiba enokuthi ivele. Xa ukude nekhaya,…